Xuutiyiinta dalkaYemen oo gantaalo ku garaacay qasriga boqortooyada Sacuudiga. – Xeernews24
Kooxda Xuutiyiinta ee ka dagaalanto gudaha dalka Yemen, ayaa sheegatay Mas’uuliyadda weerar culus oo Gantaalo ah oo lagu garaacay gudaha dalka Sacuudi Carabiya oo hoggaaminayo duulaankii lagu qaaday Yemen dhawr sanno ka hor.
Kooxdaan ayaa sheegatay inay Gantaalo ku garaacday gudaha qasriga boqortooyada Sacuudi Carabiya, sidda lagu daabacay warbaahinta ku hadasho afka kooxdaan reer Yemen ee sacuudiga laf dhuun gashay ku noqday.
Xuutiyiinta ayaa sheegtay in gantaaladaas ay ka dhasheen khasaaro inkastoo aysan kooxdaan sheegin tirada dadka ku wax yeeloobay weerarkaas.
Dowladda Sacuudiga oo ka hadashay sheegashada kooxdaan ayaa xustay inay ku guuleystay inay hawada ku burburiso laba gantaal oo nooca balaastikada ah oo ay xuutiyiinta kusoo rideen Caasimadda Sacuudiga ee Riyadh iyo Magaalada Jeysaan.
Wasaaradda difaaca dalka boqortooyadda Sacuudiga ayaa sheegtay in laba ruux dhaawacyo fudud ka soo gaadheen markii darbiyo ku dumeen intii uu socday hawlgalkii gantaladaas looga hor tagayay.
Kooxda Xuutiyiinta Yemen ayaa dhawr jeer oo hora weerar gantaalo ah ku qaaday gudaha Sacuudiga, waxayn taas keentay inay Sacuudiga xidho dhawr garoon oo kuwa diyaaradaha ah oo ku yaalo magaalooyinka u dhow dhow Xuduuda Yemen markii ay duqeeyeen kooxdaan.
Xulafada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa dhawr sanno ka hor weerar ku qaaday dalka Yemen, iyagoo sheegay inay soo afjarayaan kooxda Xuutiyiinta balse illaa hadda laguma guuleysan, waxaana dowladaha howlgalkaan hoggaaminayey kasoo gaadhay khasaaro nafadeed iyo mid dhaqaale.
Magaaladii uu ka soo bilowday Coronavirus oo xanibaada laga fuduudeeyey (Sa... Warbixin cabsi Leh iyo Is dhega tirta maamulka Somaliland iyo Faafitaanka C...